DAAWO: M/weynaha Puntland Ma aadi doonaa magaalada Kismaayo maanta?
BOOSAASO(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo xubno katirsan maamulkiisa ayaa lafilayaa in ay maanta ka dhoofaan magaalada Boosaaso, iyagoo ku sii jeeda magaalada Kismaayo ee caasumada maamul gobaleedka Jubbaland, si ay uga qeybgalaan caleema-saarka Axmed Madoobe.
Dawladda Soomaaliya ayaa ku bixinaya cadaadis xoog badan sidii uu duulimaadkan u dhici lahayn, waxayna wararku sheegayaan ina y Xukuumadda Soomaaliya wasiiradeedu xalay waqti galiyeen sidii ay meelmar uga dhigi lahaayeen doonistooda arrintan ku wajahan.
Raysalwasaaraha iyo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku amray wasiiraddan oo dhamaantood kasoo jeeda Puntland in ay waajib tahay in ay ka dhaadhiciyaan Deni in uu ka baaqsado ka qeybgalka kulanka Kismaayo, taas bedelkeedana uu xariir dhaw la yeesho dawladda Soomaaliya.
Puntland ayaa diiday dalabka Muqdisho uga yimi, wuxuuna sheegay Siciid Deni in aysan marnaba suuragal aheyn in ay Puntland ka maqnaadaan caleema-saar lagu casumay, isagoo sheegay in kii Baydhabo ooaysan raali ka aheyn Beesha Caalamkaba ay ka qeybgaleen, uuna ahaa sharci darro doorashadaas oo ay garwadeen kahayd dawladda Faderaalka.
Duulimaad gaar ah ayaa wafdigan geyn doona Kismaayo, iyadoo ay wali soo baxayaan warar ku saabsan xagga safarka, haddana Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in wafdigan ay maanta bixi doonaan.